Lavitra ny afo ny kitay ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Lavitra ny afo ny kitay !
Ity olana momba ny fanonganam-panjakana ity no mampiharihary ny tsy fahatomombanan’ny fitondrana sy ny olana ara-politikan’ny firenena. Toa mihamanalavitra ny tanjona nilokalokany ho tratrarina ny fitondrana IEM, izany hoe, sarotra ny manaja ny velirano nifanaovana rehefa misavoritaka ny toe-draharaha. ...
Tampoka loatra ny fitrangan’ny hoe misy fikomiana na fikasana hamono ny filoha. Tsy nisy loatra krizim-panoherana nahitana fa izao zavatra iainan’ny firenena izao no mahatonga ny sasany hitsiriritra ny fanjakan’Andriamatoa Rajoelina. Maro loatra ny lovam-pitondrana mila fanarenana satria mifanohitra amin’ny fikasana ny fihemorana : fanabeazana mikorontana, vonjy tavan’andro misolo ny asa andavan’andro, fifandraisana iraisam-pirenena miharava, repoblika very kolotsaina repoblikanina, fifanoherana ara-piarahamonina manjaka loatra.
Raha mifandraika amin’ny resaka fanovana praiministra iny zavatra iny, dia izay no ahitana fa misy angady tsy mahatapaka ahitra ary misy fanombanana mpikambana amin’ny governemanta tsy mandeha amin’ny laoniny. Mety misy manahy ny amin’ny fialan’Andriamatoa Ntsay sy ny ekipany fa misy koa ny matahotra ny fiovana entin’ny vaovao.
Tranga iray azo itarafana fa tsy nandingana ny fitondrana teteza-mita ny ekipa eo amin’ny fitondrana: tantely afa-drakotra ny harem-pirenena, manjaka ny didin’ny be sandry any Andilana Ambatondrazaka. Miakatra avy any an-davaka ny tarainan’ny tany mena, mitady hirehitra. Ny fidinana ifotony dia fiadiana fo hibodo ny lavaka, ka zary tsy miafina ny manam-pahefana amin’ny ataony.
Fa etsy ankilany ihany koa, toa niniana nasangizotra amin’ity resaka ity ny Fiangonana katolika amin’ny fanondroana ny mpitarika azy ho mpiray tetika amin’ny resaka fanonganam-panjakana. Niniana hampitodika ny maso any amin’ny Fiangonana indray ve ny fanaovana izany ? Diso hevitra raha izay no tanjona satria trano ambony vatolampy ny fiangonana ka ny marina no fototra iorenany.
Raha toa kosa indray ny lalàna no iorenan’ny fiarahamonina ara-politika sy ny rafi-pitantanana ny firenena, ny fomba niatrehana ity raharaha ity no nahitana fa marefo ny lalàna ary mihataka tsikelikely amin’ny toe-panahy fototra hikarohana ilay fahamarinana mbola fisaka. Rehefa tsy voahaja araka ny tokony ho izy manko ny lalàna, dia ny olona manam-panahy no voaviravira satria tsy afa-miaro azy ny lalàna. Mahavery fanahy izany, ary maha fisaka ny rariny hatrany.
Tsy ampy ny fananana lalàna, raha tiana ny hanarina firenena. Tsy maintsy omena fanahy izy mba ho zary fitsipi-piainana sy hanampy amin’ny fitondran-tena tsaran’ny olom-pirenena. Raha toa ka tsy izay no hita dia zary didy jadona ny lalàna na toy ny vainafo eo an-tampondohantsika. Nailika tsy hanana ny toerany amin’ny fomba amam-pisainan’ny olona ny fitsipika ara-moraly. Ny lalàna anefa zary vilian-tsahona, ka toy ny voahangy eny an-tanan’ny adala. Sady tsy misy fanahy no tsy lalam-piainana.
Tena mila fanarenana lalina ny fiarahamonina sy ny maha olona mendrika eto amin’ny firenena mba tsy ho sodokan’ny ankanga tsara soratra ny mpiray tanindrazana ka hanao rafotsibe kendam-bomanga. Miankina amin’ny maha marim-pototra ny lalàna manko ny maha marin-toerana ny fanjakana sy ny maha marim-pototra ny firenena. arofanina ho an’ny olona manam-panahy araka izany ny lalàna. Amin’izany rehetra izany no ilazana fa mbola lavitra ny afo ny kitay.